बैंकभन्दा कम छैनन् रुपन्देहीका सहकारी
Thursday,27 February, 2020 | बिहीबार, १५ फागुन, २०७६
विकाश पराजुली बुटवल, १९ भदौ
सहकारी विभागको २०७४ असारसम्मको तथ्यांकअनुसार प्रदेश ५ मा ४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू छन् । सहकारी संख्याको हिसाबले प्रदेश चौथो स्थानमा छ । सबैभन्दा बढी ७ सय ७९ वटा सहकारी संस्थाहरू रुपन्देहीमा र त्यसपछि दाङमा ६ सय २७ वटा छन् ।
प्रदेशमा सबैभन्दा कम सहकारी संस्थाहरू रुकुममा छन् । बाँकेबाहेक प्रायः सबै जिल्लामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू धेरै संख्यामा सञ्चालनमा छन् । सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रुपन्देहीमा ३ सय ५२ वटा छन् ।
अर्घाखाँचीमा सबैभन्दा कम ६ वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू भए पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू ७३ वटा छन् । प्रायः सबै जिल्लामा कृषि सहकारी संस्थाहरू उल्लेख्य संख्यामा छन् । कपिलवस्तुमा सबैभन्दा बढी ३ सय २९ वटा कृषि सहकारी रहेका छन्, यसपछि दाङमा २ सय ८७ वटा छन् ।
१० लाखजति सदस्यहरू रहेका यी सहकारीहरूमा झण्डै ६ हजारले रोजगारी पाएका छन् । झण्डै ६ अर्बजति शेयर लगानी रहेका यी सहकारीले करिब २६ अर्ब निक्षेप परिचालन, ३० अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् । जिल्लागत रूपमा हेर्दा रुपन्देहीमा धेरै जना सहकारीका सदस्य रहेको प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको स्थिति पत्रमा उल्लेख छ ।
कमजोर छैनन् सहकारी
प्रदेशका कतिपय सहकारीलाई सहकारी अस्तित्व बचाउन धौधौ भइरहँदा रुपन्देहीका सहकारीहरूले भने बैंककै हारहारीमा वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ नाफा आर्जन गरिरहेका छन् । कतिपय सहकारीहरू सदस्य नभएर मर्जरमा जाने तयारी गरिरहँदा रुपन्देहीका ठूला भनिएका सहकारीको प्रगति भने सबैका लागि लोभलाग्दो र अनुकरणीय बन्दै गएको छ ।
सामूहिकको नाफा ७ करोडभन्दा बढी, प्रदेशमै पहिलो एटीएम सेवा
१७ माघ, २०५० मा २६ जना सदस्य र २६ सय शेयर रकमबाट शुरू भएको तिलोत्तमा नगरपालिका– ३ मा रहेको सामूहिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा ७ करोड ९ लाख रुपैयाँ नाफा गर्न सफल भएको छ ।
त्यस्तै, कारोबारको हिसाबले प्रदेशकै पहिलो यो सहकारीमा जम्मा ७ हजार ५५ जना शेयर सदस्य रहेका छन् । यो सहकारीको कुल पूँजी २ अर्ब १२ करोड, शेयर पूँजी १८ करोड ७० लाख र कुल निक्षेप १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, यस संस्थाको ऋण लगानी १ अर्ब ७० करोड, जगेडा कोष १२ करोड ५० लाख र १० करोड अन्य कोष रहेको संस्थाका व्यवस्थापक ईश्वरी मरासिनीले बताए ।
यो सहकारीले सेवाग्राही र बचतकर्ताको सुविधा दिन भन्दै प्रदेशमै पहिलो पटक एटीएम सेवासमेत शुरू गरेको छ । एटीएम सेवा सञ्चालनमा ल्याएसँगै संस्थाले आफ्नो सेवामा फड्को मार्न थालेको देखिन्छ । संस्थाले एटीएममार्फत खानेपानी, बिजुली, हवाईजहाजको टिकटलगायतको पैसा तिर्न सकिने सेवा पनि दिन थालेको छ ।
त्यसैगरी, सदस्यका हिसाबले प्रदेशमै पहिलो जनउत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र रुपन्देहीको देवदहस्थित कोलीय देवदह सहकारीले पनि एटीएम सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । बढ्दो प्रविधिको माग र आवश्यकतालाई बुझेर सहकारीहरू पनि प्रविधिमैत्री बन्दै गएको सहकारीविद् डा. खगराज शर्मा बताउँछन् ।
जनउत्थानको नाफा ६ करोड बढी
जनउत्थान सहकारी शेयर सदस्यका हिसाबले प्रदेशमै पहिलो सहकारी हो । बागलुङ जिल्लाबाट बसाइँ सरेर साविकको टिकुलीगढ गाविस– ८, सुपौली रुपन्देहीमा आएका पाँच जना युवाहरूको अगुवाइमा २०५९ मा बागलुङ सामुदायिक संस्थाका नामबाट सहकारी शुरू भएको थियो । यो सहकारीले गत आर्थिक वर्षमा ६ करोड १३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।
संस्थामा हाल १५ हजार ५ सय ८६ जना शेयर सदस्य रहेका छन् । २०६२ मा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने उद्देश्यसहित दर्ता भएर कारोबार थालेको जनउत्थानले कुल पूँजी १ अर्ब ३१ करोड र शेयर पूँजी १३ करोड पुर्याएको छ ।
९९ करोड बचत संकलन गरेको संस्थाले ४ हजार ८ सय १६ जना ऋणीलाई १ अर्ब ४ करोड कर्जा लगानी गरेको छ । शेयर सदस्य संख्या बढ्दै गएपछि सहकारीले भैरहवा, मंगलापुर र पश्चिम अमुवा गरी तीन स्थानमा सेवा केन्द्र विस्तार गरेर सेवा दिन थालेको छ ।
दैनिक सरदर २ हजार २ सय ५७ जना दैनिक बचतकर्तासहित १९ हजार ९ सय ८५ जना बचतकर्ता सहकारीमा आवद्ध छन् । संस्थागत कोष १२ करोड ९६ लाख र कर्जा जोखिम कोष १ करोड २४ लाख पुर्याएको छ ।
तङ्ग्रिँदै छ, कोलीय देवदह
देवदह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र कोलीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबीच वि.सं. २०७५ साल माघ ५ गते एकीकरण भएर कोलीय देवदह बचत तथा ऋण सहकारी भयो । सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले यी दुई सहकारीको एकीकरण गरेकी थिइन् ।
त्यो समयमा देवदह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा २५ सय शेयर सदस्य थिए भने कोलीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ५ हजार ५ सय सदस्य थिए । यी दुईको एकीकरणपछि अहिले सहकारीमा ८ हजार ५ सय ४९ जना शेयर सदस्य छन् ।
एकीकरणपछि अहिले यो सहकारी तङ्ग्रिँदै छ । ९३ करोड कुल पूँजी रहेको यस संस्थाको शेयर पूँजी ८ करोड ५० लाख र जगेडा कोष जम्मा ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, ७३ करोड ५० लाख कुल निक्षेप संकलन गरेको यस सहकारीले ७६ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ ।
सहकारीका अध्यक्ष ऋषिराम सापकोटाका अनुसार गत आवमा यस सहकारीले २ करोड ७० लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । उनले संस्थाले चारवटा रणनीति बनाएको बताए । अध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘हामीले चार वर्षमा २ अर्ब कुल पूँजी र २० हजार ५ सय शेयर सदस्य बनाउने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले एसियाली ऋण महासंघले प्रदान गर्ने ब्रान्डसमेत प्राप्त गरिसकेका छौ ।’
अधिकांश सहकारीको ऋण लगानी व्यवसायमा
विभिन्न प्रकृतिका सहकारी भए पनि सहकारीले गर्ने लगानीको क्षेत्र भने एउटै पाइएको छ । अधिकांश सहकारी संस्थाहरूले व्यवसायमा ऋण लगानी गर्ने गरेका छन् । कुल ऋण लगानीमध्ये अधिकांश सहकारीले ६० प्रतिशत व्यवसाय र बाँकी ४० प्रतिशत मात्र अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।
सहकारीले पर्यटन, लघु जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । त्यस्तै, घर जग्गा खरिद र हायर पर्चेजमा पनि यी संस्थाले ऋण लगानी गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २०, २०७६, ०३:२७:००
होर्डिङ बोर्डले बिगारेको शहरी सौन्दर्य
आज दिनभर : पूर्वडीआईजी नयाँ पार्टी खोल्दै, ओली वामदेवलाई पेल्दै
शीर्षक बदलेर पारिश्रमिक दिँदै प्रदेश ५ सरकार
दलीय स्वार्थका कारण विद्यालय ७ महिनादेखि अध्यक्षविहीन
२ पक्षीय समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक चातुर्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ : उपाध्याय
दलबहादुरको कृषि तरक्की
पानी आयो, अब बुहारी आउँछिन्
टिमुरे प्रहरी चाैकीका तत्कालीन प्रमुखसहित १६ लाई निलम्बनकाे सिफारिस
पोखरामा ‘सिटी रेवान महोत्सव तथा फुड फेस्टिबल’ हुँदै
कसैलाई टपक्क टिपेर प्रधानमन्त्री बनाउन सकिँदैन : ईश्वर पोखरेल
कमल थापाले भने, 'प्रदेश २ काे यही सरकारलाई ५ वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ’
दिल्ली हिंसा : कपिल मिश्रासहित तीन जनाविरुद्ध एफआईआर दर्ज गर्न निर्देशन
बाँस्काेटा प्रकरण : सुई प्रधानमन्त्री ओलीतिरै
प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मदिनमा सार्वजनिक बिदा !
पाशुपत क्षेत्रमा शिवबुटीको तुँवालो